Markay tahay 7, Zora Ball waa Cayaaryahanka Dunida Ugu Da'da Yar ee Ciyaaraha Dunida | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: July 8, 2017 00: 30 No Comments
Nafaqada nafaha u dhalata, qiimaha ma sugi karo tirada sanadka, sida Corneille ayaa sidaas sheegtay. Zora yar yar Ball waa mid ka mid ah kuwa naftu u dhalatay, waxay ballanqaaday mustaqbal iftiin ah oo ku saabsan barta barnaamijka ciyaaraha fiidiyowga.
Laga soo bilaabo ugu sareeya sanadaheeda 7, waa inay ku ciyaaraan ciyaaro da'deeda ah. Laakiin gabadha, oo hadda bilowdey sanadka ugu horeeya ee dugsiga hoose ee Machadka Harambee ee sayniska iyo tiknoolajiyada Philadelphia, horey u haystay codsi mobile ah in uu credit. Waxay noqotay qofka ugu da'da yar ee ciyaaraha fiidiyaha gacanta.
Ciyaartiisa ayaa la soo bandhigay munaasabadda dhacdada Bootstrap Expo, dhammaadkii sannadkii hore, Jaamacadda Pennsylvania. Waxaa la sameeyay iyadoo la isticmaalayo luqadda barnaamijka bootstrap, oo badanaa la baro carruurta waaweyn ee u dhexeeya 12 iyo 16 si ay uga caawiyaan inay fahmaan fikradaha aljebrada iyada oo loo marayo barnaamijka ciyaaraha fiidiyowga.
Inta lagu jiro bandhigga, dhalinyarada yar yar ayaa awooday inay si buuxda dib u cusboonaysiiso codsigeeda markii la weydiisto inay sidaa yeelato, ayuu sheegay wargeyska Tech Mashable. Shaqaalaha ee Harambee Institute halkaasoo Zora ay wax ku barato isla markaana ka qeybqaadato barnaamijyada Dugsi Dheeraadka ah, waxay rajeyneysaa inay ku guuleysan doonto waxyaabo waaweyn, sida lagu sheegay maqaal lagu qoray wargeyska Philadelphia Tribune.
"Waan ku faraxsanahay Zora iyo dhamaan ardayda," ayuu yiri Tariq Al-Naasiroo maamula STEMnasium Waxbarashada Akademiyada. "Dhiirigelinta barnaamijkan waa mid caadi ah, oo ay soo galaan fasalka Sabti kasta, oo ay ku jiraan xilliyo fasax ah. »
Sanadkii la soo dhaafay warbaahinta ayaa sidoo kale wax badan ka hadashay Kelvin Doe, Sierra-da yar yar Leone 13 sano ka hor oo abuuray batariyo iyo koronto-dhaliye isticmaalaya walxaha lagu ururiyo qasacadaha qashinka. Saddex sano kadib, wuxuu noqday qofka ugu da'da yar ee lagu martiqaadi karo sharafta MIT Boston.
Oct01 09: 39